Pure Android က Gamer တွေနဲ့ Heavy User တွေအတွက် ပိုကောင်းသလား?
18 Oct 2018 . 11:45 AM
Android ဆိုတဲ့ စကားလုံးက စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေအတွက်ကတော့ ရင်းနှီးပြီးသား စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။ လက်ရှိမှာ စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေက Google က ထုတ်ထားတဲ့ Android OS ကို စိတ်ကြိုက် User Interface တွေနဲ့ ပြင်ဆင်ပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပြီး ထုတ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Google ကနေ ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Pixel စမတ်ဖုန်းတွေလိုမျိုးဖုန်းတွေနဲ့ Android One စမတ်ဖုန်းတွေမှာတော့ အခုလိုမျိုး ပြင်ဆင်ထားတဲ့ System UI တွေမဟုတ်ဘဲ လုံးဝကို ရိုးရှင်းတဲ့ User Interface ကိုပဲ အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ အမြန်ဆုံးဆိုတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေကလည်း Pure Android လိုမျိုး ရိုးရှင်းတဲ့ UI ကို အသုံးပြုထားဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Pure Android ကို သုံးထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေက ဘာကြောင့် Gamer တွေနဲ့ Heavy User တွေအတွက် ပိုကောင်းနေသလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ဒီနေရာမှာ Pure Android OS သုံးဖုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ASUS Zenfone Max Pro M1 နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြချင်ပါတယ်။ ဒီ Zenfone Max Pro M1 စမတ်ဖုန်းက Processor ပိုင်းအနေနဲ့ Snapdragon 636 ကိုပဲ အသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံမှန် Mid Range ဖုန်းတစ်ခုရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Pure Android ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် တခြားသော Processor အတူတူ အသုံးပြုထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေထက် ပိုပြီး မြန်ဆန်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုကို ရရှိနေမှာပါ။
ဒါက ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Pure Android ရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ User Interface ကြောင့်ဆိုတာက ပိုမှန်ပါတယ်။ Animation တွေနဲ့ System Application တွေက ဖုန်းရဲ့ Processing Power နဲ့ RAM ကို စားသုံးမှုနည်းပါးတဲ့အတွက် အသုံးပြုနေတဲ့ Application တွေနဲ့ Game တွေကို ပိုပြီး CPU နဲ့ RAM ကို ကောင်းကောင်းအသုံးပြုလို့ ရရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ဘယ်မှာ သိသာစေမလဲဆိုရင် Application တွေအများအပြား Multitasking အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်နဲ့ Game ဆော့နေတဲ့အချိန်မှာလည်း Background မှာ System က အသုံးပြုမှုနည်းပါးတဲ့အတွက် ပိုပြီးချောမွေ့တဲ့ Gaming Experience ကို ခံစားနိုင်မှာပါ။
အခုလိုမျိုး Pure Android ကြောင့် Processor နဲ့ RAM အသုံးပြုမှု နည်းပါးတာက နောက်ထပ်တစ်နေရာမှာလည်း အားသာချက်ရှိလာပါတယ်။ ဒါက Heat တက်တဲ့အပိုင်းမှာပါ။ Pure Android ကို အသုံးပြုထားတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေမှာ သိသိသာသာကို တခြားသော UI ပိုင်း ရှုပ်တဲ့စမတ်ဖုန်းတွေထက် Heat ထုတ်လွှင့်မှုနည်းပါးပါတယ်။ ဒါက ASUS Zenfone Max Pro M1 နဲ့ ဂိမ်းဆော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ အချိန်နာရီနဲ့ချီပြီး ဆော့ကစားတဲ့အချိန်မှာတောင် Heat တက်လာတာကို လုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ ဒါက တကယ်ကို အထင်ကြီးဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ပါ။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ Google ကိုယ်တိုင်ကနေ Android OS ကို Feature အသစ်တွေအများအပြားထည့်သွင်းလာတဲ့အတွက် ဒီ Pure Android ဖုန်းတွေမှာလည်း အသုံးဝင်တဲ့ Feature တွေ တဖြည်းဖြည်းပါဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာ Pure Android ဖြစ်နေလို့ Feature မစုံဘူးဆိုတာလည်း တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာနိုင်ပါသေးတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် ကိုယ်က စမတ်ဖုန်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် Feature တွေများပြားတာကို လူတိုင်းကြည့်ပြီး ရွေးချယ်တယ်ဆိုပေမယ့် အခြားတစ်ဖက်မှာ တကယ် ဖုန်းအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာ ရိုးရှင်းပြီး Application အများအပြားကို Multitasking ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ ဒါမှမဟုတ် Game ဆော့တဲ့အချိန်မှာ ပိုပြီးကောင်းတဲ့ Pure Android သုံးထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေက ပိုပြီးရွေးချယ်သင့်တဲ့ဖုန်းတွေလို့မြင်မိပါတယ်။ Akhayar-Tech ပရိသတ်ကြီးကရော ဘယ်လိုမျိုးမြင်မိပါသလဲ?
Android ဆိုတဲ့ စကားလုံးက စမတျဖုနျးအသုံးပွုသူတှအေတှကျကတော့ ရငျးနှီးပွီးသား စကားလုံးတဈခုဖွဈမှာပါ။ လကျရှိမှာ စမတျဖုနျးကုမ်ပဏီတှကေ Google က ထုတျထားတဲ့ Android OS ကို စိတျကွိုကျ User Interface တှနေဲ့ ပွငျဆငျပွီးတော့ ကိုယျပိုငျပုံစံဖွဈအောငျ ပွငျဆငျပွီး ထုတျလုပျနကွေတာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ Google ကနေ ကိုယျတိုငျထုတျလုပျထားတဲ့ Pixel စမတျဖုနျးတှလေိုမြိုးဖုနျးတှနေဲ့ Android One စမတျဖုနျးတှမှောတော့ အခုလိုမြိုး ပွငျဆငျထားတဲ့ System UI တှမေဟုတျဘဲ လုံးဝကို ရိုးရှငျးတဲ့ User Interface ကိုပဲ အသုံးပွုထားတာဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာ အမွနျဆုံးဆိုတဲ့စမတျဖုနျးတှကေလညျး Pure Android လိုမြိုး ရိုးရှငျးတဲ့ UI ကို အသုံးပွုထားဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ Pure Android ကို သုံးထားတဲ့ စမတျဖုနျးတှကေ ဘာကွောငျ့ Gamer တှနေဲ့ Heavy User တှအေတှကျ ပိုကောငျးနသေလဲဆိုတာကို ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
ဒီနရောမှာ Pure Android OS သုံးဖုနျးတဈခုဖွဈတဲ့ ASUS Zenfone Max Pro M1 နဲ့ နှိုငျးယှဉျပွခငျြပါတယျ။ ဒီ Zenfone Max Pro M1 စမတျဖုနျးက Processor ပိုငျးအနနေဲ့ Snapdragon 636 ကိုပဲ အသုံးပွုထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ ပုံမှနျ Mid Range ဖုနျးတဈခုရဲ့ စှမျးဆောငျရညျရှိတယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Pure Android ကို အသုံးပွုထားတဲ့အတှကျ တခွားသော Processor အတူတူ အသုံးပွုထားတဲ့ စမတျဖုနျးတှထေကျ ပိုပွီး မွနျဆနျတယျဆိုတဲ့ ခံစားမှုကို ရရှိနမှောပါ။
ဒါက ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ Pure Android ရဲ့ ရိုးရှငျးတဲ့ User Interface ကွောငျ့ဆိုတာက ပိုမှနျပါတယျ။ Animation တှနေဲ့ System Application တှကေ ဖုနျးရဲ့ Processing Power နဲ့ RAM ကို စားသုံးမှုနညျးပါးတဲ့အတှကျ အသုံးပွုနတေဲ့ Application တှနေဲ့ Game တှကေို ပိုပွီး CPU နဲ့ RAM ကို ကောငျးကောငျးအသုံးပွုလို့ ရရှိစတောဖွဈပါတယျ။ ဒါက ဘယျမှာ သိသာစမေလဲဆိုရငျ Application တှအေမြားအပွား Multitasking အသုံးပွုနတေဲ့အခြိနျနဲ့ Game ဆော့နတေဲ့အခြိနျမှာလညျး Background မှာ System က အသုံးပွုမှုနညျးပါးတဲ့အတှကျ ပိုပွီးခြောမှတေဲ့ Gaming Experience ကို ခံစားနိုငျမှာပါ။
အခုလိုမြိုး Pure Android ကွောငျ့ Processor နဲ့ RAM အသုံးပွုမှု နညျးပါးတာက နောကျထပျတဈနရောမှာလညျး အားသာခကျြရှိလာပါတယျ။ ဒါက Heat တကျတဲ့အပိုငျးမှာပါ။ Pure Android ကို အသုံးပွုထားတဲ့စမတျဖုနျးတှမှော သိသိသာသာကို တခွားသော UI ပိုငျး ရှုပျတဲ့စမတျဖုနျးတှထေကျ Heat ထုတျလှငျ့မှုနညျးပါးပါတယျ။ ဒါက ASUS Zenfone Max Pro M1 နဲ့ ဂိမျးဆော့ကွညျ့တဲ့အခြိနျမှာ အခြိနျနာရီနဲ့ခြီပွီး ဆော့ကစားတဲ့အခြိနျမှာတောငျ Heat တကျလာတာကို လုံးဝမတှရေ့ပါဘူး။ ဒါက တကယျကို အထငျကွီးဖို့ကောငျးတဲ့အခကျြပါ။
အခုနောကျပိုငျးမှာ Google ကိုယျတိုငျကနေ Android OS ကို Feature အသဈတှအေမြားအပွားထညျ့သှငျးလာတဲ့အတှကျ ဒီ Pure Android ဖုနျးတှမှောလညျး အသုံးဝငျတဲ့ Feature တှေ တဖွညျးဖွညျးပါဝငျလာမှာဖွဈတဲ့အတှကျနောကျပိုငျးမှာ Pure Android ဖွဈနလေို့ Feature မစုံဘူးဆိုတာလညျး တဖွညျးဖွညျးလြော့နညျးလာနိုငျပါသေးတယျ။
အဲ့ဒီအတှကျ ကိုယျက စမတျဖုနျးတဈခုကို ရှေးခယျြတော့မယျဆိုရငျ Feature တှမြေားပွားတာကို လူတိုငျးကွညျ့ပွီး ရှေးခယျြတယျဆိုပမေယျ့ အခွားတဈဖကျမှာ တကယျ ဖုနျးအသုံးပွုတဲ့အခြိနျမှာ ရိုးရှငျးပွီး Application အမြားအပွားကို Multitasking ပွုလုပျတဲ့နရောမှာ ဒါမှမဟုတျ Game ဆော့တဲ့အခြိနျမှာ ပိုပွီးကောငျးတဲ့ Pure Android သုံးထားတဲ့ စမတျဖုနျးတှကေ ပိုပွီးရှေးခယျြသငျ့တဲ့ဖုနျးတှလေို့မွငျမိပါတယျ။ Akhayar-Tech ပရိသတျကွီးကရော ဘယျလိုမြိုးမွငျမိပါသလဲ?